गर्मी दिउँसो र रात को लागी4योजनाहरु | बेजिया
गर्मी दिउँसो र रात को लागी4योजनाहरु
मारिया vazquez | 14/07/2021 10:00 | आराम
अब जब राम्रो मौसम अन्तमा यहाँ छ, यो गर्मी को फाइदा लिने समय हो। कसरी? हामीले उत्तम कम्पनीमा आकर्षक पाएका योजनाहरूको मज्जा लिँदै। किनकि महामारीलाई अझै विवेकीको आवश्यकता पर्दैन, त्यहाँ धेरै योजनाहरू छन् गर्मी दिउँसो र रातहरू खर्च गर्नुहोस् सम्झौता नगरी।
के तपाईंलाई लाइभ संगीत मनपर्दछ? के तपाई कला लाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ? तपाईंलाई सबैभन्दा मन पर्छ के आउटडोर र राम्रो कम्पनीमा रिलक्सनको मजा लिनु हो? हामी सबैको लागि योजना छ। विशेष गरी चार जुन उपयुक्त छन् एक जोडी को रूप मा वा साथीहरु संग रमाईलो सहरबाट धेरै टाढा नगरीकन।
1 कला र जान डिनर
2 बेलुकाको खाना र ककटेल
3 प्रत्यक्ष संगीत
4 ग्रामीण इलाका र होटल रातमा जानुहोस्
कला र जान डिनर
गर्मी दिउँसोको मजा लिन एक कला दिउँसो सधैं एक उत्तम विकल्प हो। आफ्नो शहर को एजेन्डा जाँच गर्नुहोस् र एक कला प्रदर्शनी छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई अपील गर्दछ। तपाईको टिकट अनलाइन किन्नुहोस् र हतारमा बिना नै मजा लिनुहोस्, प्रदर्शनी हल वा संग्रहालयको वातानुकूलनको फाइदा लिनुहोस् जुन प्रायश्चितको कार्यक्रम हो। सबैभन्दा तातो गर्मी दिउँसो मा, त्यहाँ एक राम्रो योजना छ?
जाँदा, तपाईको शहरको स्थानीयमा जानुहोस् जुन टेकआउट तयार गर्दछ। सबैले कुरा गरिरहनुभएको एकलाई छनौट गर्नुहोस् वा जसको बारेमा तपाईंले सधैं राम्रो समीक्षा पढ्नुभयो र अझै प्रयास गर्ने मौका पाउनु भएन। तपाइँ तपाइँको मेनू को बारे मा के मन पर्छ को चयन गर्नुहोस् र तपाइँको नयाँमा यसको राम्रो खाता दिनुहोस् बालकनी वा टेरेस। संग्रहालयमा तीव्र दिउँसो पछि, आरामदायी र घरमा राम्रो कम्पनीको आनन्द लिनु भन्दा उत्तम अरू केही छैन, के तपाईं सहमत हुनुहुन्न?
बेलुकाको खाना र ककटेल
प्रारम्भिक खाना एक रेस्टुरेन्ट वा होटेलको टेरेसमा यो गर्मी दिउँसो को एक महान योजना जस्तो देखिन्छ। एक तपस स्थान मित्रहरूसँग दिउँसोको लागि उत्तम सेटिंग हुन सक्छ, तर यदि तपाईं आफ्नो साथीसँग रातको आनन्द लिन गइरहनुभएको छ भने तपाईं केही थप घनिष्ठ हुन सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि एक संग एक ठाउँमा हिंड्नुहोस् विस्तृत ककटेल मेनू रात लामो गर्न। तपाईंसँग अविस्मरणीय समय हुनेछ। यो अन्यथा हुन सक्दैन यदि हामी सारांश वातावरण, राम्रो कम्पनी र हस्ताक्षर ककटेलहरू संयोजन गर्दछौं। के तपाईंलाई त्यस्तो कुनै ठाउँ थाहा छैन? गुगललाई काममा राख्नुहोस् वा तपाईंको साथीहरूलाई सोध्नुहोस्।
यस वर्ष ठूला चाड़हरू मनाउन सक्षम हुँदैन, तर यदि ठूला शहरहरू भन्दा अरू घनिष्टले हामीलाई प्रत्यक्ष संगीतको मजा लिन अनुमति दिन्छ। Jardins Pedralbes महोत्सव र बोटानिकल नाइट्स, बार्सिलोना र म्याड्रिड, क्रमशः, तिनीहरू केहि सबैभन्दा लोकप्रिय हो। तर त्यहाँ लास नाइट्स डेल रियो बाबेल वा वीकेंड बीच समारोह जस्तै अरू पनि छन् जुन पनि एक धेरै रोचक सांगीतिक कार्यक्रम प्रदान गर्दछ र नयाँ समयमा अनुकूलित, सबै आवश्यक सुरक्षा उपायहरूको अनुपालन।
ग्रामीण इलाका र होटल रातमा जानुहोस्
के तपाई ठूलो शहरबाट बिच्छेदन गर्न चाहानुहुन्छ? हाम्रो आफ्नै शहर नजिक प्राय: धेरै ठाउँहरू छन् जुन हामी जान्दैनौं। के तपाईं तिनीहरूलाई खोजी गर्न राम्रो समय चाहनुहुन्न? कार लिनुहोस् र नजिकैको ग्रामीण क्षेत्रमा भाग्नुहोस् जहाँ तपाईं ताजा हावा सास फेर्न सक्नुहुन्छ र आरामदायी दिउँसो पैदल यात्रामा बिताउन सक्नुहुन्छ। के तपाइँलाई केहि अलि बढी विशेष चाहानुहुन्छ? त्यहाँ सम्भवत एउटा कम्पनी छ जुन बाइक सवारी, घोडामा सवार वा क्यानोइing गर्दैछ, पत्ता लगाउनुहोस्!
अनुभव पूरा गर्न एक ग्रामीण होटल मा एक रात बुक गर्नुहोस् क्षेत्रबाट र शहरहरूमा मा गर्मी को समयमा पाउन गाह्रो छ कि मौन आनन्द। तपाईं नयाँ झैं उठ्नुहुनेछ र राम्रो खाजा पछि तपाईं शहरमा फर्किने वा आफूले रोजेको स्थानमा तपाईंको अनुभवलाई अलि बढाइ दिनको बीचमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
यिनीहरू केवल चार ग्रीष्म दिउँसो र बेलुकाका लागि योजना योजनाहरू हुन्, तर त्यहाँ अरू धेरै छन्! प्रत्येक शहर मा, तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको योजनाहरू अनुकूलित गर्नुहोस् निर्धारित गतिविधि अनुसार। तपाईंको शहरको एजेन्डा समात्नुहोस्; तपाईं अवस्थित सबै अवकाश प्रस्तावहरू आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ जुन तपाईंलाई अवस्थित छ र तपाईंलाई थाहा छैन।
के तपाईंलाई यस प्रकारको प्रस्ताव मनपर्‍यो? चाँडै हामी तपाइँलाई सानामा केन्द्रित केहि विचारहरू दिन कोशिश गर्नेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » आराम » गर्मी दिउँसो र रात को लागी4योजनाहरु
मेकअप ब्रश सेट: प्रत्येकको लागी के हो?
एक जोडी काम गर्न कुञ्जीहरू